Strava inotopa kuenderana neApple Watch Workout | Ndinobva mac
Zvirokwazvo vese vashandisi veStrava, chishandiso chinonakidza uye chekare chinocherekedza dhata kubva kubasa kwedu, vakazviona izvo mune nyowani vhezheni yakaburitswa 137.0.0 kuitwa kwemarekodhi pakati peapp neApple Tarisa Kudzidziswa kunowedzerwa. Kana iwe usati wazviona, isu tinosimbisa izvo kwauri.
Sanganisa zviitwa zvako nemhando sere dzakasiyana dzemitambo, kusanganisira bhasikoro rekunze, kumhanya kwekunze, kuchovha kwemukati, kumhanyisa kwemukati (treadmill kumhanya), kurovedza muviri, kukwira makomo, kufamba, uye kutsika kwechikepe cheNordic. Iye zvino zvese zvinoenderana kana kuti inobvumirana zvakananga neAppout app paApple Watch.
Nyora zviitiko zvako zveStrava neApple Watch yako uye siya foni yako kumba. Tora chaiyo-nguva kuona kwako kumhanya, kure, uye nemoyo kurovera, wobva waenzanisa zviitiko zvako kuburikidza neBluetooth.
Ichi chitsva chinopa kudzidziswa kuenderana chaive chinhu chiri kudiwa zvakanyanya uye izvozvi zvave kugona. Pamusoro pekuvandudzwa uku, mamwe anowedzerwa mune iyi vhezheni senge yekumisikidza senge sarudzo inobvumidza vashandisi edit chiitiko kubva ku iPhone patisingayeuke kumisikidza iyo GPS uye zvakare vashandisi veStrava Summit vanobvunza kuti vaone dhata rekurova kwemoyo, simba kana kumhanya kwedhigiri nezvikamu.
Isu tinofanirwa kupa mvumo kuchikumbiro ikangovandudzwa, saka zvatichaita kuwana iyo Strava Zvirongwa uye sarudza iyo iPhone Hutano app pane zvishandiso. Nhau dzakanaka kwazvo kune vese avo vanoda kurodha mashandiro avo kuStrava application,
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Strava inotopa kuenderana neApple Watch kushanda